Mpanamboatra milina fanapoahana bizina, mpamatsy vola - Fanapahan-tsokosoko blastika Shot
Q69 Mandalo milina fanapoahana karazana tifitra ho an'ny H Beam
Ny milina fitifirana fitifirana Q69 dia mihatra amin'ny fanadiovana ny harafesina sy ny sary hoso-doko amin'ny vatan'ny H ny andry, ny vilia vy, ny singa vita amin'ny vy sy ny vy, ny fantsona sy fantsona amin'ny fandefasana, fiara, moto, tetezana ary indostrian'ny milina.
2. Toetran'ny vokatra:
1). Ny faritra fipoahana dia manamboatra ny famolavolana fanampiana an'ny solosaina ary ny tifitra ambony sy ambany dia zaraina tsara.
2). Mampifandray ny sary fametahana sary. Izy io dia manana ny fiasan'ny fanaraha-maso mandeha ho azy ny fandrefesana ny sakany, ny fandrefesana ny haavony, ny fandrefesana famindrana.
3. Parameter ara-teknika: ATTACHED
4. Ireo serivisy voaaro azo ampiasaina
Manaiky ny famolavolana voatokana arakaraka ny zavatra takinao. Noho izany dia ampahafantaro anay pls ny fangatahana fanadiovana manokana avy amin'ny atrikasao ary ny ekipan'ny injeniera professoinal dia hanao drafitra tonga lafatra ho anao.
5. Mandia ny singa fanalahidy fipoahana mitifitra
. nitifitra fivoriambe
. efitrano fipoahana
. rafi-pitatitra roller
. rafitra fanalana vovoka
. conveyor de screw
. mpitifitra nitifitra
. rafitra fanaraha-maso elektrika
Machine Machine Tumblast Ramatoa Fandresahana fantsom-bavoka antsokosoko ho an'ny Springs sy bolts
Manomeza endrika famolavolana matihanina. Afaka mamolavola milina mety indrindra araky ny antsipiriany momba ny fahazoana sy ny fitaovana!
Ny milina fipoahana fitifirana dia vokatry ny fanadiovana, rafi-kompy, feo kely, feno ary fanadiovana tsara.
1. Ny milina dia mampiasa kodiarana blast cantilever centrifugal, dia manana fiainana lava, rafitry ny tsotra ary toetra hafa.
2. Amin'ny alàlan'ny lamba manasarona misintona mampisaraka ny lozisialy, misy fiantraikany tsara sy ny vokatra avo kokoa, dia misy fiantraikany tsara amin'ny fanatsarana ny ain'ny blades.
3. Mampiasà lalana vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy, mihena ny lozam-pifamoivoizana manimba ary avy eo mampihena ny tabataban'ny milina.
4. Ampiasao ny mpanangona vovoka pulse, afaka miangona ao anaty vovoka ny vovoka na manala ny any ivelany, manatsara ny tontolon'ny asa.
Ity andiany ity dia milina fipoahana miady fanapoahana baomba, ampiasaina indrindra amin'ny fanadiovana ny fantsom-by, ny rafitrasa, tsy misy ferrous ary ny faritra hafa. Ity milina fitifirana mitifitra ity dia manana karazana maro, toy ny karazan-jehy tokana, karazana fihodinana roa, karazana manangana, karazana tsy misandratra. Manana tombony amin'ny tsy lavaka, rafitsoratra compact, vokatra avo, sns.
1). Ny fitaovana dia ampiharina amin'ny famolavolana asa vita amin'ny habe sy kely amin'ny sehatra lehibe. Manana tombony avo lenta, rafitra firafitra.
2). Ny enti-miasa dia azo ampitaina mitohy. Ny fomba fiasa dia izao, ny fametrahana ny hafainganam-pandeha, ny fanantonana asa tanana eo amin'ireo tadivavarana ary manaisotra azy ireo aorian'ny fanadiovana fitifirana.
3). Ny kitrana tokana dia afaka manantona lanjan'ny 10 kgs ka 5000 kg miaraka amin'ny vokatra ambony sy mihazakazaka maharitra.
4). Izy io dia mitondra fiantraikany tsara indrindra amin'ny asa sarotra na amin'ny ety ivelany sy ny ao anaty, toy ny satroka cylinder amin'ny motera sy ny casing motor.
5). Safidy tsara ho an'ny indostrian'ny fiara, traktera, maotera maotera, motera moto ary valve izy ireo.
1. Sehatra fanadiovana lehibe anatiny, rafitra vita sy famolavolana siantifika. Azo atao ny mamolavola sy manangana arakaraka ny filaharana.
2. Tsy misy fangatahana manokana ho an'ny firafitry ny asa. Azo ampiasaina amina karazan-jotra isan-karazany.
3. Ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana sy fanamafisana amin'ny ampahany Fragile na tsy mihetsika, singa lehibe na lehibe, Faritra maty, Fandroahana fasika ary famaranana ivelany.
4. Ny fizarana mialoha sy fanamainana sy ny fanamainana dia manova ny maoderina fametrahana, toy ny herinaratra, ny solika, ny solika solika sy ny sisa.
5. Azo atao toy ny ampahany amin'ny tsipika fanodinana.
6. Ny fitaovana feno dia fehezin'ny PLC, ary ny fitaovana feno amin'ny sehatra mandroso iraisam-pirenena.
Ny firafitry ny masinina dia misy ny fanadiovana efitrano fivoahana, vavahady, "Y" làlan-jotra, fihodinana ary fitaovana fihodinana, conveyor de screw, hoist, separator, rafi-pisakafoanana fitifirana, fanapoahana fipoahana, vovon'ny mpanangona vovoka, rafitra elektrika, sns.
Ny fitsipiky ny moto fipoahana tsofoka mivezivezy dia rehefa aorian'ny fiasana amin'ny asa voafetra dia apetraka ao anaty fitoeram-pidiovana, mihidy ny vavahady, manomboka ny milina, asain'ny amponga ary manomboka mamadika. Mandritra izany fotoana izany, ny pellets nateraky ny milina fitifirana fitifirana amin'ny hafainganam-pandeha avo dia mamorona tsangambato mpankafy ary mitokona moramora eny ambonin'ny marika fitaovana, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanadiovana.
tifitra Peening Machine, H miendrika basy mitifitra, Fanapoahana tsiro, Masinina fipoahana baomba, Kodiarana fanapoahana tifitra, nitifitra fatratra Spare Parts, Ny vokatra rehetra